Iividiyo ezili-10 ezibaluleke kakhulu kwimbali ye-YouTube - Ezintsha
Eyona Ezintsha Iividiyo ezili-10 ezibaluleke kakhulu kwimbali ye-YouTube
Iividiyo ezili-10 ezibaluleke kakhulu kwimbali ye-YouTube
Isitayela sePsy's Gangnam yayiyividiyo yokuqala ye-YouTube ukufikelela kwizigidi ngezigidi. (Ifoto: iYouTube)
Kwimeko apho ufuna isizathu sokuziva umdala, i-YouTube izakubhiyozela usuku lwayo lokuzalwa lwe-10 kule mpelaveki.
Indawo yokwabelana ngevidiyo yasekwa ngoFebruwari 14, 2005 ngabasebenzi abathathu bangaphambili bePayPal- uSteve Chen, uChad Hurley noJawed Karim. Yafunyanwa kunyaka olandelayo nguGoogle nge-1.65 yezigidigidi zeedola, kwaye sele isiya kwiwebhusayithi yesithathu ethandwa kakhulu kwi-Intanethi- ugqithile kuphela NguGoogle noFacebook.
Ukuhlonipha i-YouTube ukuba neminyaka elishumi epheleleyo, senze uluhlu lweevidiyo ezili-10 ezibaluleke kakhulu ezake zafakwa kwisiza. Xa sisithi kubalulekile, sithetha iividiyo ezichaphazele kakhulu isikhundla seYouTube emhlabeni-njengevidiyo yokuqala ukufikelela kwizigidi ngezigidi, okanye uthotho lwevidiyo oluthi, nangona luyinkohliso, lwanceda ukuseka iYouTube njengendawo efanelekileyo yokubalisa.
Nazi izinto esizikhethayo:
1) Mna kwiZoo
Ekuboneni kokuqala, akukho nto malunga nam e-Zoo ebonakala ikhetheke ngokukodwa-yinto nje engaqhelekanga ekhangeleka ichaza iindlovu ezimbalwa. Kodwa le vidiyo yesibini-yesibini, eposwe ngumsunguli we-YouTube uJawed Karim ngo-Epreli 23, 2005, yaba yividiyo yokuqala efakwe kwisiza. Isenokungabi yeyona vidiyo ihlekisayo, enobugcisa, okanye enomdla ukude eyakha yenziwa, kodwa le nto iyinto eyimbali.
Kubuhlungu ukuba ibe -Ubonise amandla e-YouTube njengepheyinti lokuphehlelela ii-megastars ezizayo.
Kuthunyelwe kutshanje ukuya ividiyo yentsholongwane ngoku apho babiza utata wabo bamxelela ukuba bobabini bayathandana.
Kodwa kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuphuma kwevidiyo kwakungathandwa kakhulu kwi-YouTube njengokuba kunjalo namhlanje. Yintoni encede ukukhuthaza intshukumo? Sinika itoni yetyala kuKayla Kearney, ophakamileyo kwisikolo samabanga aphakamileyo owabhengeza kwisikolo sakhe ukuba ulifanasini, emva koko wabelana ngevidiyo yentetho yakhe kuYouTube ngoJanuwari, 2011.
Ah, umhlobo wethu wakudala u-KONY 2012: ividiyo eyasungula iwaka-okanye nangaphezulu njenge-100 yezigidi- i-slacktivists.
I-KONY 2012, ejolise ekuhlanganiseni ababukeli ngokuchasene nenkokeli ye-guerilla uJoseph Kony, ibonakalise izinto ezimbini ezibalulekileyo: ukuba i-YouTube ingasetyenziselwa ukwenza abantu bonwabe ngenene umbono wento ethile, kodwa kananjalo, kwicala elisecaleni, ukuba iphulo losasazo lase-US elisekwe kuphela alonelanga ngokwaneleyo ukuba lithathe umkhosi oyinyani waseAfrika.
PewDiePie , I-YouTuber yaseSweden eyaziwa ngeevidiyo ezisekwe kwimidlalo, iqikelelwa ukuba yeyona nkwenkwezi ifumana umvuzo ophezulu. Nantsi ividiyo yokuqala efakwe kwisitishi sakhe, ithunyelwe ngo-Okthobha, 2010:
Kutheni ubudlelwane beCuba / Melika buBaluleke kakhulu kwi-NJ
UJoseph Chetrit, oyena mntu ungummangaliso kwiShot enkulu eNtsha yaseNew York
'Ukuba nguCharlie' yindlela uRob Reiner ayisebenze ngayo imicimbi yakhe ngaphezulu koNyana weziyobisi
Iintyatyambo ezizenzekelayo ezizimazi zineembewu ze-cannabis
engenamahloni umhla omtsha womoya
zinkulu kangakanani i-chipotle burritos
ezona ndawo zokuthandana zasimahla zabantu abadala
Izitulo zeofisi ezilungele umqolo wakho